विचार/ब्लग Archives - Silichung.com
कस्मीरका सम्‍बन्धमा भारतले भुइँ तयारी नगरी झ्याप्प जस्तो निर्णय गर्‍यो त्यसले दक्षिण एसियामा तरंग ल्याउनु कुनै अस्वाभाविक भएन। नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रियाको जानकारी भएन। केहीले, विशेष राज्यको सुविधा जनताले पाएनन्। केही सीमित परिवारमा केन्द्रित त्यो सुविधाप्रति विरोध थियो, त्यसैले यो कदमप्रति जनताको समर्थन रह्य...
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । लेखियो संविधानमा, ‘समाजवाद उन्मुख नेपाल ।’ बन्यो सरकार । भनी बक्स्यो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ गत साल संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सस्टेनेवल डेभलोपमेन्ट सोलुसन नेटवर्क’ ले विश्वका १० खुशी र सुखी देशहरुको नामवली सार्वजनिक गरेको थियो । सुन्दर सोचाई र गुणस्तरीय जीवनलाई आधार मानी गरिएको सर्...
भोजपुर । लेकमा पाईने मालिङ्गो (एक बाँसको प्रजाती) को तामा, पात र काण्ड खाएर बाँच्ने अति दुर्लभ जिव हो, रेडपान्डा अर्थात हाब्रे । रातो, खैरो, सेतो, कालो रंग मिश्रित जिउडाल र आकर्षक गुच्छे पुच्छरले गर्दा रेडपान्डा आकर्षक बन्यजन्तु हो । मानिसको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउने भएकाले पनि यसलाई लजालु स्वभावको भनिन्छ...
भोजपुरको जरायोटार गन्धर्व बस्ती हो । यहाँका गन्धर्वहरु पहिला गाउँ डुलेर सारंगी गाउँदै गाएको कमाइले परिवारको खर्च धान्ने गर्थे । अहिले यो परम्परा लोपोन्मुख बनेको छ । यहीँकै तेजेन्द्र गन्धर्व भने रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ मा सहभागी भएपछि खुबै चर्चामा आएका छन् । उनको सारंगी यात्रा र गन्धर्व परम्पराबारे विद्या राई ...
नेपाली शिक्षकर्मीहरु अहिले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनरत छन् । हामी सबैलाई सर्वविदितै छ तथापि केही भ्रमहरु पनि छन् कि शिक्षकहरु पढाउन छोडेर अधिकारका लागि आन्दोलनमा रे ? के को आन्दोलन ? शिक्षामा गुणस्तर छैन ? निजि विद्यालयमा सबैका नानीहरु लान थालिसके आदि इत्यादि । नेपाली शिक्षकर्मीहरुले विना आन्दोलन यो मुलुकमा कुनै पनि से...
दलित समुदायको मुद्दा उठान गर्दा भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभामा विजय भएका सांसद सुदनकिरातीको एउटा गज्जबको किस्सा छ ः भोजपुरको कुनै गाउँमा उपल्लो भनिएकाजनजाति समुदायका मानिसहरुले राँगो काट्छन, त्यो राँगाको भेजामा मासु लिन एक दलित समुदायको मान्छे पुग्छन् , मासु उठाउने जोख्ने क्रममा ती दलित समुदायका मान्छेले आफैँ भेजो छुन ...
गाउँमा जन्मिए । पहाड, भीर, पहरा, छाँगा, छहरासंग पौठेजोरी खेल्दै हुर्किए । घाँस, दाउरा, मेलापात र गोठाला अनि उकाली ओराली गर्दै दैनिकी बिते । जसलाई गाउँ बस्दाका बाध्यता भनिन्छ । सहर लागेपछिका अनेक रहर । गएको हप्ता । १६ जनाको टिम भोटेकोशी पुग्यौ । रहरले रक क्लाइबिङ गरे । गाउँ छदा भिरमा घाँस काट्दै लडेर अनुहारमा चोटैचोट...
पूर्वी पहाडी जिल्लामा रेडियो प्रसारण भइसकेको थियो । भोजपुरमा एफएम रेडियो स्थापना भए पनि प्रसारण भएको थिएन । ‘खोटाङको रूपाकोट सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारित केही कार्यक्रमको नियमित श्रोता थिएँ,’ किरात राई पत्रकार संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष अवतार राईले सुनाए, ‘जनयुद्धकालमा भूमिगत रूपमा सञ्चालित गणतन्त्र एफएममात्रै होइन, कान्त...
विकासको ऐतिहासिक विकासक्रम एवं वर्तमान अभ्यासको विश्लेषण गर्दा प्रष्ट हुन्छ की विकास मानिसको सामुहिक प्रयत्नको परिणाम हो । मानिसको जीवनमा गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रक्रिया हो । विकास बहुआयामिक प्रकृया हो । विकासका लागि आर्थिक पक्ष मात्र काफी हुँदैन । तर आर्थिक मूल्य मान्यताको निर्माणका लागि आर्थिक ...
पृथ्वीमा सृष्टिको सवैभन्दा बहूमूल्य उपहार मानव जीवनलाई मानिन्छ । मानिस सर्वश्रेष्ठ चेतनशिल सामाजीक प्राणी हो । मानिस कूनै पनि ठाउंमा त्यतिकै बस्न सक्दैन उसले कूनै न कूनै कूरा सोचेको हून्छ र त्यही सोचले गर्दा मानिस अहिलेको बैज्ञानिक यूगमा प्रबेश गरेको हो । यदि मानिसमा चेतना नभएको भए सायद यो बिकासको संभावना थिएन होला...